Anigu waxaan ahay naafo - Settled
Haddii aad gaartay boggan, waxaan qiyaasaynaa inaad awood u leedahay inaad isticmaali kartid macluumaadka kombiyuutarka ama talefoonka casriga ama waxaa kaa caawiyey qof ehel ama daryeele ah. Haddii ay sidaas tahay, ma jiro wax carqalad ah oo ka iman kara ehelkaaga ama daryeelahaaga inuu kaa caawiyo si aad qadka internetka ugu sameysatid codsigaaga (making the application online).
Haddaysan awoodin inay tan sameeyaan, ama aad halkaan u timid si aad ugu raadiso talo gaar ah qof kale oo naafo ah ama daciif ah, waxaa jira adeegyo kala duwan oo bixin kara taageero.
Adeegga Mucaawinada Internetka baa kaa caawin kara helidda codsiga qadka internetka, meel cayiman ama gurigaaga, haddii loo baahdo. Iyagu talo kama bixin karaan codsiga laftiisa, laakiin way kaa caawin karaan helitaanka kombiyuutar.
Royal Society ee Dhagooleyaasha waxay bixiyaan casharro luqadda dhegoolaha ah, waxay bixiyaan xilliyo luqadda dhegoolaha ah, ama khadka internetka ah ama meelo kala duwan oo dalka ah.